Runyerekupe rweApple Watch Series 8 Kuonekwa Kwekurara Kuvandudza Kunosimuka | IPhone nhau
Runyerekupe rweApple Watch Series 8 Kurara Kwekuona Kuvandudza Kunosimuka
Apple ikambani inopa basa rayo rakawanda kune hunyanzvi, asi pane dzimwe nguva inomisikidza michina yayo yezvemari kutarisa mamwe makambani anozviita nemazvo. Izvi zvakaitika neBeats with with Mubhedha, kambani specialized in sleep monitoring. Beddit akabatana neApple muna 2017, uye mushure mezvo vakatangisa kambani yazvino yekurara yekutarisa muna 2018. Mushure meizvozvo havasati vaita zviziviso zvine chekuita nekambani kusvika parizvino ... Apple yafunga "kudzima" Beddit uye izvi zvinongove nechirevo chimwe chete: Apple inogadzirira kugadzirisa kutarisa kwekurara kune iri kuuya Apple Watch Series 8. Ramba uchiverenga kuti tinokuudza zvese zvechiziviso ichi.
Zvinofanira kutaurwa kuti kunyangwe yave nguva refu kubva Apple yakawana Beddit (anenge makore 5), kwave kune mafambiro mumakambani ese ari maviri. Sezvatakataura vakabva vapinda 2018 iyo yazvino Beddit yekutarisa, uye zvakare yakamira kutsigira Android. Apple yakaramba ichitengesa Beddit Kurara Monitor muApple Stores asi iko zvino vamisa mutsara uyu wehardware. Monitor iyo zvakatibvumira kuyera otomatiki nguva yekurara kwedu, vedu kukwira kwemoyola kufemala tembiricha y humidity imba yekurara, uye kunyangwe yedu ngonono. All thanks kune zvishoma masensor ataifanira kuisa pasi pemetiresi yedu.
Zvino mushure me "kuvhara" kwayo Runyerekupe rutsva rwunobuda rwunoisa iyo inotevera Apple Watch Series 8 semugari wenhaka kumabasa aya. Zvine musoro sezvo Apple Watch iri Cupertino's sensor mudziyo par kugona, uye sezvatakakurukura mune yedu yekupedzisira podcast, ma sensor anogona kunge ari ma protagonists ekugadzirisa kunotevera. Ichava shoma kugadziridza kazhinji, asi Kutarisa kwekurara kunogona kunge kuri bhena reinotevera Apple Watch Series 8. Uye iwe, uri kufunga kuvandudza yako Apple Watch gore rino kana iwe ukahwina nyowani yekurara yekutarisa sensor?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runyerekupe rweApple Watch Series 8 Kurara Kwekuona Kuvandudza Kunosimuka
Gadziridza masikati: iOS 15.2.1 uye yechipiri Beta yeIOS 15.3
WhatsApp yave kuda kugadzirira nyowani yenzwi inoridza inoridza